War Deg Deg ah:Warar Cusub suuqa kala ibsiga Cayaartoyda ee Maanta %
War Deg Deg ah:Warar Cusub suuqa kala ibsiga Cayaartoyda ee Maanta
Laacib Sports : Kusoo dhawaada Akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad dunida ka joogtaan, ku soo dhawaada wararkii ugu danbeeyay suuqa kala iibsiga ee Laacibsports.com annagoo ka soo tarjunay wargeysyada Yurub ka soo baxa maanta oo Talaado ah.
Hadii aan ku hor marno Suuqa kala iibsiga ayaa furmaya bisha Janaayo iyadoo kooxahaYurub la filayo inay soo iibsadaan xiddigo ay isku sii xoojiyaan inta ka harsan xilli ciyaareedka, halka kooxaha qaar ay isha ku hayaan xiddigo ay doonayaan xagaaga danbe, waxaana talaado walba idin soo gudbin doonaa wararkii ugudanbeeyay ee suuqa kala iibsiga.
Ciyaaryahanka lagu magacaabo Eden Hazard oo 27-jir ah ayaa mar kale u gacan haatiyay Real Madrid kadib markii uu sheegay inuusan ogeyn wakhtiga uu go’aan ka qaadanayo mustaqbalkiisa Stamford Bridge,Balse Xiddiga reer Belgium wuxuu wadahadal kula jiraa kooxdiisa si uu heshiis cusub u saxiixo maalmaha soo socda.
Dhanka kooxda Ac Milan hadii aan fiirino Leanardo ayaa xaqiijiyay in kooxda ka dhisan San Siro ay dhigeeda weydiisaneyso helitaanka xiddiga reer Spain Cesc Fabregas kaas oo 31-jir ah sanadkaan.
Naadiga Tottenham Hotspur ayaa kula biirtay dhigeeda Man United doonista xiddiga reer Romania Dennis Man, 20-jirkaan wuxuu ka tirsan yahay kooxda Steaua Bucharest FC SB.
Kooxda Manchester United ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro 21-jirka Lyon ka tirsan ee Tanguy Ndombele kaas oo sidoo kale bartilmaameed u ah kooxaha Manchester City, Barcelona & Tottenham iyo kooxo kale oo aan weli shaacin rabitaankooda.
Shayaadiinta Cascas Man United ayaa heshay fursad ay kula saxiixato Frenkie de Jong oo 21-jir ah iyo Matthijs de Ligt oo 19-jir ah ka hor inta aysan u ciyaarin Ajax, balse wey iska diideen sida uu xaqiijiyay madaxii hore akadeemiga ee kooxda.
Ugu dambeyntii Liverpool ayaa qiimeyneysa xaaladda xiddiga Borrusia Monchengladbach Thorgan Hazard. 25-jirkaan reer Belgium waa walaalka xiddiga Chelsea Eden. Wuxuu ku biiri karaa Reds bisha January ee soo socota sanadka 2019-ka.
Suuqa kala ibsiga Cayaartoyda
Eden Hazard ma aqbali doonaa in uu sii joogo Chelsea? xog muhiim ah